Uncategorized – Impact Hub Yangon
အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတင်လိုသူများနှင့် ဆက်လက်တိုးချဲ့လိုသူများအတွက် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း၏ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအား ပိတ်သိမ်းရန် အချိန် (၃) ရက်သာကျန်ပါတော့သည်။ ယခုသင်တန်းအား အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ ၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Business Idea Stage (လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများ ) ဖြည့်သွင်းရမည့် လင့်ခ်: https://bit.ly/YgnMdyKachinBusinessIdeaStageApplicationForm Business Ongoing Stage (လုပ်ငန်းလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ) ဖြည့်သွင်းရမည့် လင့်ခ်: https://bit.ly/YgnMdyKachinBusinessOngoingStageApplicationForm သင်တန်း တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင် လူဦးရေ ကန့်သတ်မှု ရှိပါသောကြောင့် အမြန်ဆုံး လျှောက်ထားကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
UNDP Myanmar မှကြီးမှူး၍ ပြုလုပ်သွားမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကိုဗစ် ၁၉ ရိုက်ခတ်မှုများမှ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တည်တံ့စေရန် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်ထုပ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို အခြေခံသော MSME လုပ်ငန်းများအား အဓိကထား၍ စီးပွားရေး စီမံကိန်း နှင့် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ပေးမည့် စီးပွားရေးအထောက်အကူပြုသင်တန်းတွင် ပါဝင်လိုပါသလား ယခုသင်တန်းအား အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ ၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။…
JOB DESCRIPTION ENTREPRENEURSHIP PROGRAM MANAGER Position: Full-time (Contract – 8 months) Location: Thingangyun, Yangon Start Date: Immediate Background Impact Hub Yangon is part of the world’s largest entrepreneurship community and currently supporting and scaling Myanmar economic development through entrepreneurship programs. Impact Hub Yangon is working with…
ကိုဗစ် ၁၉ ရိုက်ခတ်မှုများမှ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တည်တံ့စေရန် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတင်လိုသူများနှင့် ဆက်လက်တိုးချဲ့လိုသူများအတွက် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း UNDP Myanmar မှကြီးမှူး၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကိုဗစ် ၁၉ ရိုက်ခတ်မှုများမှ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တည်တံ့စေရန် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှု…
Congratulations to the Finalists of Innovate to Nourish (I2N) Myanmar Challenge 2021
Congratulations to the shortlisted finalists of Innovate to Nourish (I2N) Myanmar Challenge 2021. We are looking forward to work with you to makeachange in the food system of Myanmar with the power of innovations. We really thank you for each and everyone of the enterprise who…
Business Recovery Program for Micro and Small Enterprises has been successfully finished!
Business Recovery Capacity Building Program for Micro and Small Enterprises has been successfully finished in the last Sunday (3rd October 2021) with the business recovery idea pitching session. We also would like to thank Friedrich Naumann Foundation Myanmar for supporting the implementation of this training program. We would…
Special Price for Co-working Space Promotional Period Extended
Special Price for Co-working Space Promotional Period Extended We understand that it is an extraordinarily difficult time for businesses because of Covid-19 pandemic and current situations in Myanmar. Because of these situations, businesses including startups, MSMEs and entrepreneurs are facing challenges and difficulties in recovering and continuing their…
Kitchen Hub from Taunggyi, Shan State has been relocated to the new location of Yangon recently. The renovation and installation of facilities and equipments are almost finished and we are ready to serve asafood incubator providing facilities and services to develop or manufacture food products as…
Thank you very much for taking interest and submitting the applications to the Innovate to Nourish (I2N) Myanmar Challenge 2021. All the applications are currently being reviewed and they are in the process of evaluation. We will be announcing the shortlisted finalists in the coming week in our…
Myanmar MSMEs are currently facingalot of challenges because of the crisis. But most of them are trying to survive as the business cannot be stopped and there are employees & families depending on those businesses. Therefore, in this discussion, we would like to haveapanel…